Found 89 ~ Mateu, Mako, Ruka, John, Mabasa, VaRoma, 1 VaKorinte, 2 VaKorinte, VaGaratiya, VaEfeso, VaFiripi, VaKorose, 1 VaTesaronika, 2 VaTesaronika, 1 Timoti, 2 Timoti, Tito, Firimoni, VaHebheru, James, 1 Petro, 2 Petro, 1 Johani, 2 Johani, 3 Johani, Judha, Zvakazarurwa
vanhu vakanga vagere murima vakaona chiedza chikuru navavo vakanga vagere munyika nomumumvuri worufu chiedza chakavabudira.”
Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kuna vamwe vamire pano vasingambofi vakaona rufu, vasati vaona Mwanakomana womunhu achiuya noumambo hwake.”
“Chinzwai, tavakukwira kuJerusaremu. Mwanakomana womunhu achaturirwa mumaoko avapristi vakuru nenyanzvi dzomutemo. Vachamutongera rufu,
“Achaparadza vanhu vakaipa ava norufu rwakaipisisa, achazopa munda wamagirepisi iwoyo kuna vamwe vokuti vaushandise vachimubhadhara vachimupa michero panguva yayo.”
Judhasi, uya akamutengesa, paakaona kuti Jesu atongerwa rufu akatendeuka akadzorera mari iya yesirivha makumi matatu kuvapristi vakuru navakuru — vakuru achiti,
“Chinzwai, tava kukwira kuJerusaremu; Mwanakomana womunhu achaiswa mumaoko avapristi vakuru nenyanzvi dzoMutemo; vachamutongera rufu; vachimuisawo mumaoko evechirudzi;
Vakamanikidza mumwe murume aipfuura naipapo achibva kumaruwa, ainzi Simoni wokuSairini, baba vaArekizanda naRufusi, kuti atakure muchinjikwa wake.
Pita akati, “Tenzi ndakagadzirira kuenda nemi kuJeri kana kurufu chaiko.”
kunyangewo Herodhi nokuti amudzorera kwatiri. Tarisai muone kuti hapana chaakaita chinokodzera rufu.
uye kuti vapristi vakuru navatongi vakamukwirira dare kuti atongerwe rufu vakamuroverera pamuchinjikwa.
Zvirokwazvo Zvirokwazvo ndinoti kwamuri anonzwa izwi rangu uye achitenda akandituma anoupenyu husingaperi haagadzwi dare; asi atobva kurufu achienda kuupenyu.
Zvechokwadi chokwadi ndinoti kwamuri munhu akachengeta shoko rangu haambofa akaona rufu.”
VaJudha vakati kwaari, “Zvino tava kuziva kuti une mweya wakaipa Abhurahamu; akafa vaporofitawo vakafa; asi iwe unoti munhu akachengeta shoko rangu haambofa akaona rufu.
Ipapo Jesu ainge achitaura nezvorufu rwake. Asi ivo vakafunga kuti aireva kuvata hope chaidzo.
Akataura izvi achiratidza rufu rwaaizofa narwo.
Izvi zvaiva zvokuzadzisa zvakanga zvambotaurwa naJesu zvokuti aizofa norufu rwakaita sei?
Ndakatambudza venzira iyi kusvika parufu ndichisunga ndichiuisa mujeri varume nevakadzi zvingatopupurirwawo
Ndakaona kuti vaimupa mhosva dzezvemutemo wavo asi hapana mhosva yavaimupa inokodzera rufu kana kuiswa mujeri.
Kana ndiri munhu akakanganisa uye ndakapara mhosva ipi neipi zvayo inokodzera kuti ndife handisi kuda kutsvaga kupunyuka rufu asi pane zvavari kundimhan'arira kana pasina mhosva hapana angakwanise kunditurira mumaoko avo. Ini ndinoda kuti mhosva yangu ichisvitswa kuna Siza.”
Asi ndakaona kuti hapana chaakaita chinokodzera rufu, uye sokukumbira kwaakaita iye pachake kuti mhosva yake isvitswe pana Mambo mukuru, ndakafunga zvokumutumira ikoko.
Pavakanga vabva vakataurirana vachiti, “Munhu uyu hapana chaari kuita chinokodzera rufu kana kuiswa mujeri.”
Pavakandiongorora vakada kundisunungura nokuti ndakanga ndisina mhosva inokodzera rufu.
Saizvozvo sokuuya kwakaita chitadzo pasi pose nokumunhu mumwechete; rufuwo rukauya nokuchitadzo, saizvozvowo rufu rwakapararira kuvanhu vose nokuti vanhu vose vakatadza.
Asi rufu rwaitonga kubvira kuna Adhamu kusvika kuna Mosesi, ruchitonga kunyange vane zvitadzo zvisina kuenzana kukura nezvaAdhamu aiva mumvuri wouyo aizouya.
Hamuzivi here kuti isu tose takaombekwa muna Kristu Jesu. Takaombekwa murufu rwake.
Naizvozvo takavigwa pamwechete naye nokuombekwa murufu rwake kuti sokumutswa kwakaitwa Kristu kuvafi nembiri yaBaba isuwo tifambe muupenyu hutsva.
Kana takabatana naye murufu rwaakaita serwake tichabatanawo naye mukumuka kwaakaita.
Tinoziva kuti Kristu zvaakamutswa kuvakafa haachazofazve. Rufu haruchamutongazve.
Hamuzivi here kuti mukazviisa mumaoko omumwe munhu savaranda vanomuteerera, matova varanda vomunhu iyeyo wamunoteerera? Chingave chitadzo chamunoteerera chinosvitsa kurufu kana kuteerera kunotsvitsa mukururama.
Asi chii chamakawana muzvinhu izvozvo zvamavakutonyara nazvo. Mugumo wazvo rufu.
Chinondidariso ndechokuti paya pataigara upenyu hwenyama, havi dzedu dzoutadzi dzaishanda munhengo dzedu dzichimutswa nomutemo kuti tiberekere rufu muchero.
Iwo mutemo chaiwo wakatsidzira upenyu ndiwo wakatova rufu kwandiri,
Ko zvino tingati icho chinhu chakanaka kudai chakaunza rufu kwandiri here? Handizvo kwete, asi kuti chitadzo ndicho chaikonzera rufu mandiri nomune chinhu chakanaka, kuti chitadzo chionekwe zvachiri kuti chitadzo. Uye chashandisa mutemo kudaro chichibva chanyatsobuda pachena kuti chakaipisisa.
Zvino ini, panguwo pano, ndiani achandinunura kumuviri wangu uyu worufu.
nokuti ndine chokwadi chokuti hapana rufu kana upenyu kana vatumwa kana vano ukuru ukuru kana zvinhu zviripo iye zvino kana zvichauya kana masimba,
Ndikwazisireiwo Rufusi mukuru mukuru mubasa raTenzi naamai vake vari amai vanguwo.
Angave Pauro kana Aporosi kana Kefasi; ingave nyika kana upenyu kana rufu, ingave nguva ino, kana yamangwana, zvose ndezvenyu;
Nokuti panguva dzose dzamunodya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munoparidza rufu rwaTenzi kusvikira auya.
Sokuuya kwakaita rufu nokumunhu mumwechete nokumunhu mumwechetewo kwakauya kumuka kwavakafa.
Muvengi wokupedzisa anofanira kuparadzwa, rufu.
Rufu rwakamedzwa nokukurirwa kwarwakaitwa Nhai rufu kukurira kwako kuripi? Iwe rufu rumborera rwako ruripi?
Rumborera rwerufu chitadzo. Simbawo rechitadzo mutemo.
Akatinunura munyatwa yorufu uye achatinunura. Chivimbo chedu chiri maari chokuti achatinunurazve.
Zvino kana zvinounza rufu zvakanyorwa zvichiitwa zvokutemerwa pamabwe, zvakauya nokupenya kwakadaro zvokuti vaIsiraeri vakatadza kutarisa uso hwaMosesi pamusana pokubwinya kwahwo kunopera,
Tinogara takaberekana narwo rufu rwaJesu kuti upenyu hwaJesu huratidzwewo mumiviri yedu.
Paupenyu hwedu, tinogara takangotarisana narwo rufu pamusana paJesu kuti upenyu hwaJesu huratidzwe munyama yedu inofa.
2 VaKorinte 4:12
Naizvozvo, isu tinogara takafudzwa narwo rufu asi imi muri muupenyu.
Ivo vashandi vaKristu here? Ini ndinotova mushandi wake ari nani. Zvino ndava kutaura zvangu somunhu anopenga. Ndakashanda zvakaomarara kupinda ivo. Ndakaiswa mujeri kakatowanda kutovapfuura. Ndakarohwa kakawanda, ndikatarisana norufu kakawanda.
Ava munhu kudaro akazvidukupisa akateerera kudzamara pakufa, rufu rwomuchinjikwa.
Ndinoda kuziva Kristu uye simba rokumuka kwake uyewo kuti ndigoverane naye matambudziko ndichivawo saiye murufu rwake
Asi iye zvino akaratidzwa pachena nokuzvionesa kwomununuri wedu Kristu Jesu akaparadza rufu akaunza upenyu ndokuratidza pachena, nokuShoko Rakanaka, upenyu nokusafa.
Naizvozvo, pamusana pokuti vana vedzinza inyama imwechete neropa rimwechete, ndokusaka iyewo akava nyama imwechete neropa rimwechete nesu, kuti norufu rwake agoparadza simba rouyo ainge aine simba rorufu, Satani.
Vapristi vokutanga vaive vazhinji nokuti vaitadziswa norufu kuti vaenderere mberi nebasa ravo.
Naizvozvo Kristu ndiye mukumbanidzi panyaya yechitenderano chitsva kuti avo vakadaidzwa vagamuchire chivimbiso chenhaka isingaperi nokuti pakafiwa rufu apa runovanunura kumhaka dzavakapara vari pasi pechitenderano chechiposhi.
Kana ruchiva rwabata runobereka chitadzo. Kana chitadzo chadzika midzi chinounza rufu.
Inga isu tinoziva wani kuti takabva kurufu tichienda kuupenyu nokuda vehama kwatinoita. Munhu asina rudo anogara ari murufu.
Ndini mupenyu uya, hongu ndakambofa zvangu asi tarisa uone ndava mupenyu nokusingaperi uye ndine kii dzorufu nedzokunzvimbo yavafi.
Vana vake ndichavaparadza norufu. Masangano ose ndipo paachaziva kuti ndini ndinoongorora pfungwa nemwoyo womunhu uye ndichakupai, mumwe nomumwe wenyu, maererano nezviito zvake.
Ndakatarisa, onei bhiza rakabhuruvara, zita romutasvi waro rainzi Rufu Nzvimboyorufu ichimutevera mushure. Chikamu chenyika chechina chakaiswa mumaoko avo kuti vauraye vanhu nehondo yebakatwa nenzara nedenda nezvikara zvapasi.
Pamazuva iwayo vanhu vachatsvaka rufu vasingaruwani vachasuwira kufa, asi rufu ruchatiza.
Pfumvu dzaro dzichariwira nezuva rimwechete, dzinoti rufu, kuchema rufu, neshangwa yenzara uye richapiswa nomoto nokuti Mwari anoritonga ane simba guru.”
Akakomborerwa zvake uye mutsvene munhu uyo anenge ari mumwe waavo vapakumuka kokutanga ikoko. Pane vakadai, rufu rwechipiri haruna simba asi vachava vapristi vaMwari naKristu, vachatonga naiye kwechiuru chamakore.
Gungwa rakaburitsa vakafa vaiva mariri. Rufu nenzvimbo yavafi zvakaburitsawo vakafa vakanga vari mazviri; vose vakatongwa maererano nezvavakanga vaita.
Rufu nenzvimbo yorufu zvakakandwa muzidziva romoto. Urwu ndirwo rufu rwechipiri; dziva romoto.
Achapukuta misodzi yose pamaziso avo. Rufu haruchazovapozve, hapachazova nokuungudza kana kuchema kana kurwadziwazve, nokuti zvinhu zvakare zvinenge zvapfuura.”